July 2013 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
ဘဝသည် ပန်းချီကားတချပ်မဟုတ်။ သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေမည်။ အလင်းရောင် လိုအပ်သည်။ လိုအပ်သော ဘဝအလင်းရောင်ကို ဖန်တီးပေးမည့် ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကား ရှားလွန်းလှသည်။ ထိုနည်းတူစွာ အရိပ်တကြည့်ကြည့် နှင့် စောင့်ကြည့်နေသူမှာ ဆရာလှခေး (သို့) အလင်းရောင် ဖန်တီးပေးသူဟု ဆိုရမည်။
NayHtet HtetAung's photo.
ဒီအခန်းမှာလည်း အကဲစမ်းမှုများလို့သုံးနှုန်းထားတဲ့လအသုံးအနှုန်းရဲ့ အမှန်တကယ် အနက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ရုတ်တရက် တောင်းဆိုလာကြမည့်ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် ဈေးနှုန်း ခြင်းတိုက်ဆိုင်ပြီး
ဈေးဆစ်မှုများ ပစ္စည်းခြင်းယှဉ်လာမှုများနှင့် မထင်မှတ်စွာ ကြုံတွေ့ရမည့်ပြဿနာ အခက်အခဲများကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Ucs Jugger's photo.
Seaman Nayminthu shared Than Saw's photo.
ဒီနေ့မနက် အိပ်ယာနိုးနိုးခြင်း အညှီအဟောက်ပုံတွေတင် ညစ်ညမ်းဆဲဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ မိန်းမတစ်တယောက်ပုံ လက်ညှိုးထောင်ပြီး ဆဲပြ တဲ့ ပို့စ်တ်တင်ပြီး သူငယ်ချင်းအနေနဲ့ လာအက်ဒ်တဲ့ သူကို ဘလော့ဂ်လိုက်တယ်။
July 17, 2013 at 3:17am
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာသည် နိုင်ငံသားအများဆုံးကိုးကွယ်ရာ ဘာသာသာသနာ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ လက်ထပ်ထိမ်းမြားရေး၊ အမွေခွဲဝေရေး၊ သားသမီးမွေးစားရေး စသည့် မိသားစုကိစ္စ၊ အိမ်ထောင်မှုကိစ္စများကို မြန်မာဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေအရ ဆုံးဖြတ်ရသည်။
အလားတူပင် အမှုသည်များသည် မိုဟာမေဒင်ဘာသာဝင် ဖြစ်လျှင် မိုဟာမေဒင်တရားဥပဒေအရ လည်းကောင်း၊ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ဖြစ်လျှင် ဟိန္ဒူတရားဥပဒေအရလည်းကောင်း၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်လျှင် ခရစ်ယာန်တရားဥပဒေ အရလည်းကောင်း၊ ဆုံးဖြတ်ကြရသည်။ အမှုသည်များ၏ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဘာသာကိုလိုက် ဆုံးဖြတ်ရသော ကြောင့် ၄င်းဥပဒေကို ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာ ဥပဒေဟုခေါ်သည်။
ဘတ်စ်ကား စပယ်ယာက လက်ကြားထဲတွင် အလျားလိုက်ခေါက်ပြီး ညှပ်ထားသော ငွေစက္ကူများထဲမှ ကျပ်တန်လေးရွက်ကို ဆွဲထုတ်ပြီး ...
"ငါးကျပ်တန်ပေးတာ ဘယ်သူလဲ" ဟု မေးသည်။
"ဒီမှာ ... ဒီမှာ"
Media ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ လူထုအားပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍပင်ဖြစ်သည်။ တနည်းဆိုရသော် Media = Communication to People + Feedback from People ဟုလည်း ကျွန်တော်နားလည်ထားပါတယ်။ မြန်မာပြည်၏ ပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍသည် ပွင့်လင်းလာမှု အနည်းငယ်ရှိလာသည်မှာ သိပ်မကြာသေး။
ကျုပ်သိသလောက်တော့ လစ်ဘရယ် Liberal ဆိုတဲ့ဝေါဟာရက liber ဆိုတဲ့ လက်တင်ဘာသာစကား က လာပါတယ်။ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ပြန်ရင် free ပါ .... အနှောင်အဖွဲ့ကင်းခြင်းသဘောကို ဆောင်ပါတယ်။ လစ်ဘရယ် ၀ါဒ ကို ခုံမင်နှစ်ခြိုက်သူတွေ ... လက်ခံကျင့်သုံးသူတွေကို Liberalism လို့ခေါ်ပါတယ်။
အသက် ၈၀ အရွယ် အဘိုးအိုနှင့် အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ် ပညာတတ် သားဖြစ်သူတို့ ဧည့်ခန်းတွင်းရှိ ဆိုဖာ တွင် ထိုင်နေကြစဉ် ရုတ်တရက် ပြတင်းတံခါးပေါက်သို့ ကျီးကန်းတစ်ကောင် လာရောက်နားလေသည်။ အဲဒီအခါမှာ အဖေဖြစ်သူက အဲဒါဘာကောင်လဲလို့မေးသောအခါမှာ သားဖြစ်သူက အဲဒါကျီးကန်းလေ ဟုဖြေဆိုလေသည်။
Buddha'sservant Thansin Myint shared Health Articles's photo.
လက်ဖက်ဆီဟာ မှဲ့နဲ့ အသားသီးတွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ လက်ဖက်ဆီနည်းနည်းကို ဝါဂွမ်းစတစ်စနဲ့ ဆွတ်ပြီး အသားသီးရှိတဲ့ နေရာတွေကို တိုက်ရိုက် သုတ်လိမ်းပါ။ တစ်နေ့တစ်ကြိမ် ဒါမှမဟုတ် နှစ်ကြိမ် ခန့် ပြုလုပ်နိုင်ပြီး လေးပတ်ကျော် ကြာတဲ့အထိ၊ အသားသီး ပျောက်တဲ့အထိ လုပ်ဆောင်ပေးပါ။
တေးသံရှင်မီးမီးခဲရဲ့ faceook စာမျက်နှာပေါ်မှာ သူ့ရဲ့ အသက် ၃၀ ပြည့် မွေးနေ့အတွက် ဆုတောင်းပေး တဲ့ သူငယ်ချင်း တွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ Single Mom တယောက်အဖြစ် ဖြတ်သန်းနေရပေ မယ့် ပြန်ကြိုးစားသွားမယ် ဆိုတဲ့ Status တခုကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ မီးမီးခဲနဲ့ အဆိုတော် ထူးအယ်လင်း တို့ဟာ ၁၁ နှစ်ကျော်လောက် လက်တွဲခဲ့ပြီး လက်ရှိ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေကြဘူးလို့ သိကြပါတယ်။
သြဂုတ်လ(၂)ရက်နေ့ ထုတ် ရှေ့ဆောင်(The Leader) ဂျာနယ် အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၃၅
ဇူလိုင်လ (၂၉)ရက်နေ့ ထုတ် မြန်မာတောင်သူကြီးများ ဂျာနယ် အတွဲ ၄ ၊ အမှတ် ၅၆
ဇူလိုင်လ (၃၀)ရက်နေ့ ထုတ် မဇ္ဈိမ နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာ
ယဉ်ကျေးပျူငှာ ယာဉ်လုပ်သားကောင်းများ ဖြစ်လာစေချင်
အိန္ဒိယထံမှ ရေကြောင်းဆိုင်ရာလက်နက် အကူအညီရရှိရန် မြန်မာကြိုးစား
ကွန်ကရစ်လမ်းသမိုင်း (သို့မဟုတ်) အမြန်လမ်း Express Way
ငွေသိန်း ခြောက်ဆယ်ကျော် ပျောက်ဆုံးမှု ရှာဖွေ ဖမ်းဆီးရာမှ မန္တလေး ဆေးရုံကြီးတွင် လှည့်လည်ခိုးယူ နေသူအား ဖမ်းမိ
၄၉ လမ်းထောင့် တိုက်ခေါင်မိုးထပ်က ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း ရဲဝင်ဖမ်းလိုက်ပြီ
၀င်လေ ထွက်လေ တစ်ခုတည်းသာ စူးစိုက်မှတ်ရတာမဟုတ် (Not only Breathing)
Author: lubo601 | 7:16 AM | No မှတ်ချက် |
Mie Mie Win Pe shared Ni Ni Win's photo.
(ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဦးဓမ္မသာမိ၏ "Different Aspects of Mindfulness (1999)" မှ ဘာသာပြန်ထားပါသည်။)
ဒီနေရာမှာ ဆွေးနွေးချင်တာက တရားမှတ်ရာမှာ ထွက်သက်ဝင်သက်သာ အရှုခံအာရုံမှန်ဖြစ်တယ်၊ အခြားအာရုံသို့ စိတ်ရောက်နေလျှင် မမှန်ဆိုတာ အတွေးအမြင်ပေါ်တတ်ပုံနှင့် ယင်းအတွေးအမြင်က သတိတရားအစစ်အမှန် တည်ဆောက်ရာမှာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တတ်ပုံတို့ဖြစ်ပါတယ်။
တရားမှတ်ရာမှာ ရှုမှတ်နိုင်တဲ့ အရှုခံအာရုံတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာ…ထွက်လေ၀င်လေ၊ ၀မ်းဗိုက်ဖောင်းပိန်၊ ဓါတ်ကြီး ၄ပါး(ရေ၊မြေ၊လေ၊မီး)၊ အရောင်(သို့) ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကို စိတ်ထဲမှပုံဖေါ်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။
“ နင့်အဖေဘေး ငြိမ်ငြိမ်နေ
M Sai Mon Thar
ကျုပ်တို့ဖခင်တွေက သားသမီးတွေကို ဘယ်တော့မှပြောမထွက်တဲ့ စကားတွေရှိတယ်...... ကျုပ်ပြောပြမယ်......"
ကိုစံရိုးပြောတဲ့စကားတွေက သားသမီးတွေအတွက်မှတ်သားထိုက်သည်.....။ သူ့ရင်ဘတ်ကြီးနှင့်ရင်း၍ပြောသည့်စကားများဖြစ်သည်.......။
ရှုံးနိမ့်ခြင်းကို အောင်မြင်ခြင်း အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့သူများ
လူ့ ဘ၀ ဟာ ပန်းခင်းတဲ့လမ်း မဟုတ်တဲ့ အတွက် (ကျွန်တော်တို့ တွေ ဘယ်လောက်ပဲ အကောင်းဆုံး မျှော်လင့်ချက်တွေ ထားပြီး ဘယ်လောက်ပဲ ရုန်းကန်လှုပ်ရှား နေပါစေ) တနေ့ နေ့တချိန်ချိန်မှာ မျှော်လင့်မထားတဲ့ ဆုံးရှူံးမှုတွေ၊ စိန်ခေါ်မှု တွေကို မလွဲမသွေ ရင်ဆိုင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တင်ပါးကြီးခြင်းသည် ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းကြောင်း လေ့လာချက်အသစ်
တင်ပါးကြီး ခြင်းသည် ကျန်းမာ ရေး အတွက် ကောင်းကြောင်း လေ့လာ ချက် အသစ်အရ သိရသည်။ တင်ပါးနှင့် ပေါင်လုံး ကြီးခြင်းသည် ဗိုက်ပူခြင်း ထက် စာလျှင် ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွား စေသော ကိုယ်လက်စထရော အမျိုး အစား ကို လျော့နည်းစေပြီး သွေးလွှတ်ကြော နံရံများ မာကြောမှုကို ကာကွယ် ပေး သည့် ကျန်းမာ ရေးအတွက် ကောင်းသော ကိုယ်လက် စထရော အမျိုးအစား ကို မြင့်တက် စေကြောင်း လေ့လာချက် အသစ် များအရ သိရ သည်။ တင်ပါး လုံး ကြီးခြင်းသည် ဆီးချို ရောဂါ ဖြစ်နိုင် ခြေကို လည်း လျော့ ချ ပေးနိုင် သည်။
ယခု တွေ့ရှိချက် အသစ်သည် ယခင်တွေ့ ရှိချက်ဖြစ်သော မြေပဲတောင့်ပုံ ခန္ဓာကိုယ် ရှိခြင်းသည် အကျိုး ကျေးဇူးရှိကြောင်း တွေ့ရှိ ချက်ကိုလည်း .ထောက် ခံရာ ရောက်သည်ဟု ဆိုသည်။
July 28, 2013 at 7:33am
တက္ကစီပေါ်မှ ဆင်းကာ ချိန်းထားတဲ့ဟော့ပေါ့ဆိုင်လေးရှေ့ ရောက်လာချိန်အထိ တွေ့ ရင်ကောင်းမလား ၊ မတွေ့ ရင်ကောင်းမလား နဲ့ ဝေသွယ်ချီတုံချတုံဖြစ်နေဆဲ ....မနေ့ က ၃ခါကြီးများတောင် ဖုန်းဆက်ပြီး ဆက်ဆက်လာခဲ့ပါလို့ ပြောနေတဲ့ ဟန်နီ့ကို အားနာလို့ သာ လာခဲ့ရ ပေမယ့် တကယ်ဆို ကျောင်းမှာ တုန်းကမေဂျာတူအတန်းတူဆိုပေမယ့် ဝေသွယ် နဲ့ဟန်နီ က သိပ်တွဲမိတာတော့မဟုတ်ပါ။
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက် _ "ကျွန်တော်နဲ့ ဘွဲ့လွန်ပါရဂူ"
July 29, 2013 at 1:18am
_ [၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ]
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ကျွန်တော်နဲ့ ပါရဂူဘွဲ့ဆောင်းပါးကို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုရေးသားခဲ့တာဟာ ဘယ်သူဘယ်ဝါကိုမှ ရည်ရွယ်ပြီးပြစ်တင် ဝေဖန်တဲ့သဘောနဲ့ ရေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ ရှိနေ၊ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေကိုသာ အများသိအောင်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သင်တန်းတစ်ခုမှာ စာသင်ပြီး တက်ရောက်လာတဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေကို မေးခွန်းမေးစေပါတယ်။ ကျွန်တော်သင်တဲ့ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာမေးခွန်းတွေ မေးလိမ့်မယ်လို့ ထင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာသာရပ်မေးခွန်းကိုမမေးဘဲ Ph.D ဆိုတာဘာလဲ ရှင်းပြပေးပါလို့ မေးခဲ့ပါတယ်။
Ph.D ဆိုတာ အမှန်တော့ Doctor of Philosophy ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို နားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Doctor ဆိုတဲ့ စကားကို အများက ဆရာဝန်ပဲလို့ နားလည်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဟင့်အင်းနှင့် အင်းများ (စွန့်လွှတ်သူနှင့် သိမ်းပိုက်သူ)
ကျွန်တော်ဆင်းရမည့် မှတ်တိုင်က ဝေးသေးသည်။ ဒီတော့ ပေပြီးထိုင်နေလိုက်သည်။
“ အဘ လာလာ၊ ကျွန်တော့်နေရာမှာ ထိုင်လိုက်ပါ ”
စကားသံကြား၍ကြည့်လိုက်တော့ လူငယ်တစ်ဦးက သူ့နေရာကို တက်လာသော အဘ အတွက် ဖယ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဘဆိုပေမယ့် ကျွန်တော့်အမြင်မှာတော့ သန်သန်မာမာရှိသေးသည်။
Author: lubo601 | 4:38 PM | No မှတ်ချက် |
ဒုံးကျည် သို့မဟုတ် ပဲ့ထိန်းဗုံး တစ်လုံးကို ရည်ရွယ်ထားသော ပစ်မှတ်ရှိရာသို့ ထိန်းကြောင်း လမ်းညွှန်ပေးသော နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး ရှိပါသည်။ ပစ်မှတ် အား တိကျစွာ ထိမှန်နိုင်မူသည် ထိရောက်မူကောင်းသော ဒုံးကျည် တစ်စင်း ဖြစ်ရန်အတွက် အရေးပါသည့် အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပြီး လမ်းညွှန်စနစ်သည် တစ်ချက်တည်းဖြင့် ပစ်မှတ်အား ထိမှန်နိုင်ခြေ အားတိုးမြှင့်ပေးပါသည်။
Author: lubo601 | 4:33 PM | No မှတ်ချက် |
Author: lubo601 | 11:16 PM | No မှတ်ချက် |
July 28, 2013 at 10:19pm
အင်္ဂလန် ဘုရင်၏ တိုက်သဘောင်္တစ်စင်းတွင် အုပ်ချုပ်သော ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်သည်သူ၏သားငယ်ကို
ပင်လယ်ပြင် အတွေ့ အကြုံသဘောင်္ဖြင့်ခေါ်လာပီး သဘောင်္၏သဘောတရား ပင်လယ်ပြင် နက္ခတ်
နှင့် စစ်လက်နက်တို့ ၏သဘောတရားများကို လေ့လာစေသည် ဖခင်ဗိုလ်ချုပ် က သားဖြစ်သူ ကာဆာဘရင်ကားအား သားဒီသဘောင်္ပေါ်မှာရှိတဲ့ သူတွေအားလုံးဟာ အဖေ့အမိန့် ကို အားလုံးနာခံရတယ်။
ထူးဆန်းထွေလာ ဒေါ်ပု လက်ရာ ဂမ္ဘီရ ၀က်သားတုတ်ထိုး အမှုတွဲရှင်းတမ်း
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ဘွရှင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ရံဖန်ရံခါ ရခိုင်အစားအစာတွေကို စိတ်ကူးတည့်သလို စတေးတပ်တင်ချက်ပြုတ်ပြီး လူတကာကို သွားရည်ကျအောင် ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ သတ္တ၀ါတစ်ကောင်ပါ။ အဲဒီလို ကိုယ့်စတိုင်လ်နဲ့ကိုယ် (တကယ်တော့ အမေ့စတိုင်လ်) ချက်နည်းပြုတ်နည်းတွေကို မူပိုင်ခွင့် တင်ထားတာမျိုး မရှိပါဘူး။
ဖိနပ်ပျောက်ခြင်းသည် အနာဂတ်ကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်
“ ဟိုက် သွားပြီဟ ”
ကျွန်တော်အထိတ်တလန့်ဆိုတော့ မိန်းမဖြစ်သူက ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပြီးမေးတယ်။
“ ဘာဖြစ်တာလဲ ”
“ ဖိနပ်မရှိတော့ဘူးဟ ”
“ ဟင်ဟုတ်ပ။ ဒီနားမှာ အတူတူချွတ်ထားတာပါ ”
Author: lubo601 | 10:57 PM | No မှတ်ချက် |
ရေးသားတင်ပြသူ mar mar မှ ဂျူလိုင် 29, 2013 တွင် 10:43am
Author: lubo601 | 10:56 PM | 1 Comment |
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းငယ်ကိုထိခိုက်ပျက်စီး စေသည့်အကြောင်းအချက်များ ပြုလုပ်ခြင်း။
(၁) မိမိ၏စိတ်နေသဘောထား နိမ်ကျခြင်း။
(က) ကိုယ့်ဆီကို လာပြီးဝယ်ယူ၊ စုံးစမ်းတဲ့ ဖောက်သည်တွေကိုအမှန်အတိုင်း ပြောဆို လမ်းညွှန်မှု့မပြုတော့ဘဲ အမြတ်များများ ၏ကျန်မယ့်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေထိုးရောင်းခြင်း ။ ပစ္စည်းအစစ်နှင့်အတု ရော၍ ရောင်းချခြင်းတွေ လုပ်ဆောင်ခြင်းဟာ စိတ် သဘောထားနိမ့်ကျခြင်း ဖြစ်ပြီး အနှေးနှင့်အမြန် အလုပ်ကို ထိခိုက်နစ်နာလာစေပါတယ်။
“ သမီးအဖေပြောနေရင် တစ်ခွန်းနဲ့ရ။ မရရင်တော့ ရိုက်မှာနှော် ”
သူက ကိုင်နေတဲ့ဖုန်းကို မချချင် ချချင်ဖြင့် ချထားလိုက်သည်။
သမီးက ငယ်သေးသည်။ ခေတ်ကာလအလျှောက် တိုးတက်လာမှုကြောင့် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဖြင့် ဖုန်းကိုဖွင့်တတ်သည်။ ဂိမ်းကစားသည်။
သူတို့နိုင်ငံပညာရေးဝန်ကြီးရဲ့ ဆင်ခြင်စဉ်းစားစရာကောင်းတဲ့ မိန့်ခွန်းတစ်ခု
အောက်ပါ မိန့်ခွန်းလေးက အမေရိကန်ပညာရေးအတွင်းရေးမှုး (ပညာရေးဝန်ကြီးနဲ့အတူတူပဲ လို့ထင်ပါတယ်) ရဲ့ မိန့်ခွန်းပါ။ ၂၀၀၃ -ခုနှစ်၊ မတ်လက ပြောခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းပါ။ ခေါင်းစဉ်က Teaching the Virtues (ကောင်းမြတ်မှုများကို သင်ကြားပေးရေး) ဖြစ်ပါတယ်။ မိန့်ခွန်းပြောသူက ယခင် ပညာရေး အတွင်းရေးမှုးဖြစ်သူ William J. Bennett ဖြစ်ပါတယ်။
ပြောတဲ့ မိန့်ခွန်းအနှစ်ချုပ်ကတော့ ....
(၁) အမေရိကန်မှာ သာမန် ရှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးလေးတစ်ယောက်ကတောင် ပညာရေးဝန်ကြီးတစ်ယောက်ကို မကြောက်မရွံ့ မေးရဲပြောရဲ၊ စေ့စေ့ကြည့်ရဲတယ်။ ဒါကောင်းတဲ့ ဒီမိုကရေစီပြယုဂ်တစ်ခုပါတဲ့...
July 28, 2013 at 10:30am
ရှဉ့်လေးများပင် ကျနော့်ကို မှတ်မိနေလေပြီ။ သစ်ပင်အောက် ထိုင်ခုံလေးတွင် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ လာထိုင်နေသော ကျနော့်ကို တိရစ္ဆန် လေးများပင် မှတ်မိနေလေပြီ။ ပထမ ရက်တွင် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ ကိုယ်ကို မြှောက်လိုက် ကျနော့်ဖက်သို့ ကိုယ်ကို မတ်ကာ ကြည့်လိုက် လုပ်နေတတ်သည်။
Author: lubo601 | 4:10 PM | No မှတ်ချက် |
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့အခြေစိုက် အိမ်ခြံမြေ အကြံပေးကုမ္ပဏီဖြစ်သော Knight Frank က ၂၀၁၃ ခုနှစ် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအ စီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် HNWI ဟုခေါ်သော အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ အထက် ကြွယ်ဝချမ်းသာသူပေါင်း ၃၉ ဦးရှိကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းအပြင် မြန်မာနိုင်ငံသည် HNWI အရေအတွက် များပြားလာနိုင်ခြေတွင် အာရှတိုက်၌ အမြင့်မားဆုံးဖြစ်ပြီး ၁၀ စုနှစ် တစ်ခုအကြာ ၂၀၂၂ ခုနှစ်သို့ အရောက်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ ထက် ကြွယ်ဝချမ်းသာသူပေါင်း ၃၀၇ ဦး ရှိလာ လိမ့်မည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် ပြောင်းလဲနိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်းသည် ၆၈၇ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး အာရှတိုက်တွင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။
လွှတ်တော်နဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု ကော်မတီဟာ ဘာအတွက်လဲ......
လူအများစုဟာ လွှတ်တော်နဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု ကော်မတီအပေါ် ကျွန်တော်ဝေဖန်တာကို အတော်လေး မကျေလည်ကြတာ သတိထားမိပါတယ်..... အထူးသဖြင့် လွှတ်တော်မှာ အတိုက်အခံဖြစ်တဲ့ NLD ပါတီက အမတ်တွေ ဝင်သွားခဲ့ပြီး တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု ကော်မတီမှာ NLD ဥက္ကဌ ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်စုကိုယ်တိုင် ဦးစီးနေချိန်မှာ ဒီလိုဝေဖန်၊ ထောက်ပြတဲ့အတွက် အထိ မခံနိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်.......
By Popular News | Saturday, July 27, 2013
၂၁ ရာစု လူငယ်တွေရဲ့ ဖက်ရှင် အစိတ်အပိုင်းတွေထဲက တစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်လာတဲ့ တက်တူးဖက်ရှင်က ၂ဝ၁၂၊ ၂ဝ၁၃ ဝန်းကျင်မှာတော့ ပိုမို ကျယ်ပြန့်စွာတွေ့ရှိလာရပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က အနုပညာ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ တက်တူးဟာ ရှေးမြန်မာမင်းများလက်ထက် ထိုးကွင်းမင်ကြောင်များ ရေးဆွဲခြင်းမှ အစပြုခဲ့တယ် ဆိုရပါမယ်။